Yini wokuzilibazisa emangalisayo - ngenalithi! Abesifazane abaveli kuphela egxilile umsebenzi, kodwa futhi ikhefu okumatasa ukuphila nobunzima ezikhathazayo kwansuku zonke. Ngalesi sikhathi kuba ebhekiwe ngokuphelele ekwenzeni okuhle, uma usebenza ngawe noma ukudala ezinye uhlobo into ngoba kothandekayo.
Phakathi zonke izinhlobo ngenalithi Ukwaluka ngodobo kubhekwa indlela kakhulu elula. Ngakho-ke, ukuze uyifinyelele, asikho isidingo namakhono kakhulu futhi wangibekezelela kakhulu. Wonke umuntu wesifazane kusheshe kahle amasu ukunitha anjalo, futhi umkhuba iza amakhono. Ayikho into elukhuni ongayifunda kanjani ukwakha shawls kanye stoles hook.
Kanjani ukwakha umkhiqizo loqobo?
Ngokuqonda izisekelo - ufunde elula emoyeni izihibe nokuthunyelwe ezihlukahlukene, kufanele akhethe sokucaba "wangempela" into enkulu. Zama ufunde ukuthi ungadala izesekeli okukhethekile - shawls. Crochet kungaba vyvyazyvayut Motifs ngaminye kamuva kudingeka ukuxhuma iwebhu. Kungaba elingunxande - ke uthola tippet, futhi kungaba esingunxantathu isesimweni - futhi ngeke itshali. Ungesabi ukuthi into ingavuli kahle. Phela, ngokungafani tselnovyazannyh imikhiqizo, lapho kukhona iphutha kuyoholela amakhosi ukuba abe okubi ingxenye enkulu ukudla ezihlobene, izakhi ngabanye noma ngayiphi indlela ukuba nomunye asithinteki, futhi ungahlala ngokushesha ulungise iphutha yabo. Ngakho kuthathwe ngesibindi imbangela!
Yini ngidinga ukulungiselela?
Ngaphambi kokuqala ukukhiqizwa shawls hook ukwenza okungenani indaba emfushane olunzima umkhiqizo esizayo. On ishidi ukudweba umdwebo weseli -. Square Ubukhulu cishe 12 by 12 cm ke ukuxhuma emakhoneni okuphambene a diagonal. Umphumela waba emfushane itshali ukukhilosha isikimu. Wabasaqalayo, izisebenzi ezinekhono kwakudingeka kwelinye calantsatfu umbusi ukubamba lozalo emagumbini onke amaseli ukuze bathole amadayimane ngabanye (owaziwa nangokuthi izikwele). Manje lula ukubala inamba ukucacisa ukuthi bangaki kudingeka Motifs (elihambisana isikimu 1 mm kuya ku-1 cm ngokoqobo). Lapho umsebenzi usuphothuliwe, wena umane ukuxhuma izakhi ndawonye. Ungasebenzisa amakhrayoni, uma ufuna ukwenza iphethini weJiyomethri. Bala inombolo izingxenye esingunxantathu.
Umqondo Great - sebenzisa ntambo izinsalela ezahlukene, ezithinta senkosikazi ngamunye. Kuphela yako iwufanele ngempela ukujiya Pick ntambo kanye ukuthungwa ukuze kuzuzwe inhlanganisela ivumelane e ngibamba umphetho walo. Hook akudingekile ukusebenzisa mncane - kungcono uma izinto Airy, okuxekethile. Lokhu itshali ziyokuwa emahlombe enhle. Kuvele okufana ezithakazelisayo - Melange ntambo. Yekuchumana yalezi amayunithi wezinhlamvu uyobheka ngaphezulu yokuqala, ngisho noma motif square isikimu aphansi.
Ukubuthanela le shawls siphelile
Ukukhilosha, ungakha kanye fantasy izakhi, ngokungafani nomunye. Nakuba lena umsebenzi ukuze uthole olunye knitters abanolwazi, kodwa futhi mfunda-makhwelo needlewoman Ungazama ngesandla sabo, ukudala tippet yasekuqaleni. Kulokhu-ke kubalulekile ukuba iphethini ngesayizi yemvelo, okuyinto unamathisele izinto ngendlela oyifunayo, bese kancane kancane uwafake ndawonye emoyeni ngamaketanga. Ngemva itshali ukukhilosha obumbene ukushisa nje kuphela, kodwa ngezinye izikhathi futhi njengoba accessory fashion izingubo.